I-Wholesale Fire Assay Cruciblesa, i-Silicon Carbide Graphite Crucible Manufacturing - Xtlceramic
Ikhaya > Izindaba
"Ikhwalithi ephezulu, intengo ekhethwayo" yimfundiso yethu yokuphatha. silindele ngobuqotho ukubambisana nenqwaba yamakhasimende asekhaya nawakwamanye amazwe, intuthuko evamile! Siyakwamukela ukuvakashela futhi uphenye inkampani yethu.
Imishini esetshenziswa kakhulu ekuhloleni umlilo
Indlela yezithako zokuhlola umlilo
Umgomo oyisisekelo wokuhlolwa komlilo (Isimiso Sendlela)
Ukuhlaziywa kokuhlolwa komlilo empeleni kuyindlela yokuhlola esebenzisa i-crucible noma i-cupel njengesitsha.
Ukusebenzisa i-Gold Assaying Crucible
Ithiyori ye-Fire Assay kanye nendlela
Izici ze-Fire Assay Method
Indlela yokuhlola umlilo iyindlela yakudala yokuhlaziya esebenzisa izimiso nezindlela ze-metallurgy kukhemistri yokuhlaziya, futhi ingenye yezindlela ezindala kakhulu kukhemistri yokuhlaziya.Indlela yokuhlola umlilo iwukunquma ngokomthamo okuqukethwe kwezinsimbi eziyigugu ngokwengeza ukuguquguquka kwezinsimbi ezincibilikayo kanye nemikhiqizo yensimbi.
Isethulo Semisebenzi Yabasebenzi
Isithombe Seqembu Samakhasimende Wombukiso